Ity no tranofiara voalohany an'ny Samsung Galaxy Note 8 | Androidsis
Ity no tranofiara voalohany an'ny Samsung Galaxy Note 8
Alfonso ny voankazo | | Samsung
Tsy dia misy sisa ny Samsung Galaxy Note 8 hahitana ny mazava. Ny mpikambana manaraka ao amin'ny fianakaviana Note an'ny mpamorona Koreana dia natolotra ny 23 aogositra ho avy izao ary Samsung dia efa manomboka manafana motera. Ary inona no fomba tsara kokoa noho ny horonan-tsary ofisialy voalohany an'ny Samsung Galaxy Note 8!
Fantsona iray tonga miaraka amina tanjona mazava be: hanadino ny loza nanjo ilay teo alohany. Ho an'izany tonga ny Samsung Galaxy Note 8 feno vaovao tena mahaliana izay hitondra fahasamihafana raha oharina amin'ireo mpifaninana aminao.
Samsung dia namoaka ny teaser voalohany an'ny Galaxy Note 8
Zava-misy izany Samsung Galaxy Note 8 dia ho iray amin'ireo finday avo lenta indrindra amin'ny taona. Ny terminal, izay haseho ao New York City ny 23 Aogositra, hanana antsipiriany tena mahaliana izy, toy ny rafitra fakan-tsary roa izay mampanantena zavatra betsaka.
Araka ny efa hitanao tao amin'ny horonantsary miaraka amin'ity lahatsoratra ity, ny S-Pen dia hitohy ho ampahany lehibe amin'ny terminal. Pen penina izay nanjary marika mampiavaka ny tsipika Note, ary raha ny Note 8 dia tsy ho afa-miavaka amin'izany.
Ary tsy mampiseho loatra izany doka izany, zavatra mitombina raha mieritreritra azy isika, saingy misy pitsopitsony manamarina ny iray amin'ireo toetra ara-teknikan'ny Samsung Galaxy Note 8: ny fehezan-teny faran'ny doka milaza hoe "Manaova zavatra lehibe kokoa ", izay nadika tamin'ny teny espaniola dia lasa zavatra nitovy tamin'ny«manao zavatra lehibe.
Ary antenaina fa ny Galaxy Note 8 dia manana efijery noforonin'i a Tontonana Super AMOLED 6.3-inch miaraka amin'ny fanapaha-kevitra 2K ary hahagaga anao izany satria io dia eo alohan'ny terminal manontolo. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy miandry ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny Galaxy Note 8 isika mba hahitanao izay tsy ampoizina anao amin'ny mpamokatra. Satria ny mazava dia ny tsy hahagaga ny phablet manaraka an'ny mpamokatra, ary betsaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ity no tranofiara voalohany an'ny Samsung Galaxy Note 8
Rosario dia hoy izy:
Nividy fakan-tsary Netatmo Presence aho, tena mandeha tsara, saingy indraindray dia manome fampandrenesana diso izany, ao amin'ireo fanazavana dia milaza fa tsy maintsy hasiana fikajiana. Voalaza marina izany: eo amin'ny tsivalana fampiharana, kitiho ary tazomy ny kisary tag anao (app mobile) na kitiho ny kodiarana (amin'ny app web). Safidio ny "edit" ary ahena ny fahatsapana ny tag voalaza. Tsy afaka nahita ilay fanovana napetraka aho. Afaka manampy ahy ve ianao? Mialoha dia misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Rosario
Mandra-pahatongan'ny LG V30 dia efa fantatrao ny interface interface